सपथ खाने वित्तिक परराष्ट्रमन्त्रीले भने, ‘एमसीसी जसरी पनि पास हुन्छ’ – Sunaulo Nepal TV
सपथ खाने वित्तिक परराष्ट्रमन्त्रीले भने, ‘एमसीसी जसरी पनि पास हुन्छ’
काठमाडौं – नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी जसरी पनि पास गर्ने बताएका छन् । मन्त्रीको सपथ खाए लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारमा कार्यभार सम्हाल्दै खड्काले जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने बताए ।
एमसीसी लगायतका विषयमा भएका कुराहरुसहित यसले पार्न सक्ने प्रभावलाई अध्ययन गरेर अघि बढ्ने उनले बताए । ‘एमसीसीबारे सिर्जना भएका मिथ्या कुरालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र सुरक्षालाई ख्याल राखेर अघि बढ्छु’ उनले भने ।
परराष्ट्र नीति दल विशेषको नहुने बताउँदै उनले सबै मुलुकसँग घनिष्ठ र सन्तुलिन सम्बन्ध कायम राख्दै अघि बढ्ने जनाए । इन्डो–प्यासिफिक र अन्य नयाँ गठबन्धको कारण अवसरसँगै चुनौति पनि सिर्जिएको बताउँदै उनले एकपक्षीयभन्दा बहुपक्षीय नीति अँगालिने बताए ।
राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएर स्वदेश फर्किएपछि राजदूतहरु सिफारिस गर्ने समेत उनले जनाए । ‘म फर्केर आएपछि मात्र कुन देशमा कस्तो व्यक्ति पठाउने र साझा हित हेरेर राजदूत पठाउँछौं’ उनले भने ।
राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन मन्त्री खड्कासहितको नेपाली डेलिगेसन टोली आजै बेलुका ८ः३० मा न्यूयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।
महासभामा सार्क क्षेत्रसहित विभिन्न मुलुकका विदेशमन्त्रीलाई भेटेर विचार आदानप्रदान गर्ने योजना रहेको उनले बताए । राष्ट्रसंघमा नेपालको एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने बताउँदै उनले त्यसबाहेक अन्य योजना त्यहाँ नरहेको उनले बताए । news24expres बाट
Previous धर्ती मातालाई देखेपछि चल्यो रुवाबासी एकाएक रुन थाले भक्तजनहरु , के छ त्यस्तो अचम्मको शक्ती ? (भिडियो)
Next होटलमा तिन दिन सम्म एउटै कोठामा २ केटि १ केटा संगै सुते संगै खाए तर एक्कासि के भयो?